Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A June 2011 (2)
Q and A June 2011 (2)
1. အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။
2. လည်ပင်း-အကျိတ် ခွဲပြီးတာ ၁၄ ရက်ရှိပါပြီ။
3. ကျွန်တော်၏အမေ ခြေထောက်ယောင်နေသည်မှာ
4. Hi Dr. Tint Swe,
5. ကျနော့်အသက်က ၂၃ ရှိပါပြီ။
6. ယခုလို သိချင်တာ မှန်သမျှ အသေးစိတ် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်
7. ကျွန်မက အသက် ၂၇ နစ်ရှိပါပြီ။
8. အမျိုးသားက ဦးခေါင်းမှာ ဗောက်ထတဲ့အလေ့ရှိပါတယ်။
9. ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါက ဝမ်းချုပ်တာပါ။
Apr 4, 2011 at 10:36 AM
အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့က တလမှာ ၂ ကြိမ်လောက်ပဲ အတူတူ နေဖြစ်ပါတယ်။ သူက နယ်မြို့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလို့ပါ။ ပုံမှန်တားဆေး မသောက်ပါဘူး။ ECee2 ကိုပဲ သောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားက ကလေးလိုချင်ရင် မရတော့မှာ စိုးလို့ဆိုပြီး အဲဒီဆေးကို ဆက်မသောက် စေချင်ဘူး ပြောပါတယ်။ ပုံမှန် နေရတာ မဟုတ်တော့လဲ ပုံမှန်ဆေး မသောက်ချင်လို့ အရေးပေါ်-တားဆေးက ကိုယ်ဝန် မရနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဒီတခေါက် ဆေးသောက်တာ Second pill ကို First pill သောက်ပြီး ၁၂ နာရီ ကြာမှာ သောက်ရမှာကို မိနစ် ၃ဝ ကျော်သွားပါတယ်။ Effective ဖြစ်ပါတော့မလား။ ကိုယ်ဝန်များ ရသွားနိုင်မလား။ နောက်နှစ်ဆန်းလောက်မှ
ကလေးယူမလို့ စဉ်းစားထားလို့ပါ။ ဆက်ပြီးတော့လည်း အခုလိုပဲ နေဖြစ်မှာမို့လို့ ဘယ်လိုတားနည်း သုံးရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ ကွန်ဒုံးလည်း သုံးလို့
• Ecee2 ဆေးဆိုတာ
• This message may not have been sent by: mailer-daemon@googlemail.com
ကျွန်မ လည်ပင်းအကျိတ်ခွဲပြီးတာ ၁၄ ရက်ရှိပါပြီ။ ခွဲပြီး ၅ ရက်ခန့်အကြာတွင် အနံ့တမျိုး အမြဲရနေပါတယ်။ သံပုရာသီးပုပ်နံ့နှင့် ဆင်တူပါတယ်။ လေတိုက်သောအခါ ခပ်စူးစူးအနံ့များနဲ့ထိတွေ့သောအခါ မျိုးမှာပိုဆိုးလာပါတယ်။
ခွဲစိတ်စဉ်က ညာဘက် Nerve တခုကို အနဲငယ် ထိသွားတယ်လို့သိထားပါတယ်။ Parathyroid လဲ တခုသာ ကျန်တော့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခုလိုအနံ့ရသည်ကို ဆရာဝန်မှ Cetrizine o.d for 10 days သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၆ ရက် ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သော်လဲ လုံးဝမသက်သာသဖြင့် ဘာဆေးသောက်ရမလဲဆိုတာ အကြံပေးပါ။
• ဟုတ်တယ်၊ နဲနဲ ဆန်းတယ်။ အသံကိုသာ သက်ရောက်စေတယ်။ အနံ့ကိုမသက်ရောက်တတ်ပါ။
• မေ့ဆေးသုံးခွဲတယ်ထင်တယ်။ မေ့ဆေးအမျိုးအစားလဲ ကွာတယ်။ ဆေးရုံအဆင့်အရ မေ့ဆေးသုံးတာ မတူတတ်ပါ။ ဘယ်တိုင်းပြည်၊ ဘယ်မြို့၊ ဘယ်အဆင့် ဆေးရုံ မသိပါ။
• လည်ပင်းအကြိတ်ကိုခွဲလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းလဲ မသိပါ။
• ခွဲပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုပြောပြတာ ကောင်းပါတယ်။
• ၁၄ ရက်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲလဲ ရှိလောက်ပြီထင်တယ်။
• Neuribion/Neurobion Forte tablet စားဆေး နဲ့ ဗီတာမင် စီ တွေကနေ အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်။
2011/6/25 Vam Pire
ကျွန်တော်၏အမေ ခြေထောက်ယောင်နေသည်မှာ ၂ လခန့်ရှိပါပြီ။ှ အရင်တစ်ခေါက်က ဆရာ့ကို မေးဖူးပါတယ်။ သွေးတိုးကြောင့် ယောင်တတ်တယ်လို့ ဆရာမှပြန်လည်ဖြေကြားပေးဖူးပါတယ်။ ဆေးခန်းလည်း သွားပြနေပါတယ်။ ဆရာဝန်မှ သွေးတိုးကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ ယခုထက်ထိ ခြေထောက်ယောင်နေသည်မှာ မသက်သာသေးပါ။ အရင်တစ်ခေါက်က သွေးကျဆေး စွဲသောက်ရမည်ဟု ဆရာမှပြန်လည်ဖြေကြားပေးဖူးပါတယ်။ သွေးကျဆေး စွဲသောက်ရင် ဘယ်လိုသွေးကျဆေးမျိုး စွဲသောက်ရမလဲဆိုတာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါ။ ဗိုက်လည်း ယောင်နေပါတယ်။ အမေ့ ခြေထောက် ယောင်နေတာ ပြန်ကောင်းစေချင်ပါတယ်။
• သွေးတိုးဆိုတာ တသက်လုံး ရှိသွားမဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်တာ အများဆုံးဘဲ။ သွေးချိန်ပြီး ဆေးစွဲသောက်နေရမယ်။ လူနေမှုဘဝ ပုံစံကိုပါ တခါတည်း ပြောင်းလိုက်ရတော့မယ်။ ထမင်းဝိုင်းမှာ သူများတွေလို၊ အရင်ကလို စားလို့မရတော့ဘူး။ ဒါကို စိတ်ကအစ ပြုပြင်ရမယ်။ လောကကြီးမှာ စားစရာ မျိုးစုံရှိတာဘဲ။ ဒါမစားရရင် တခြားစားစရာတွေကို ကြိုက်လာအောင် လုပ်ရမယ်။ အဖြူတွေက နဲနဲလေး စပ်တာတောင် မရဘူး။ အဖြူ-အမဲတွေက ငါးပိကို အနံ့တောင် မခံနိုင်ကြဘူး။ ကိုယ့်အစားကိုသာ အစားလို့ ထင်မှတ်စွဲယူတာကို ပြောင်းပြစ်လိုက်ရတော့မယ်။ အကုသိုလ် လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ အသက်ရှည်အောင်၊ မိသားစုအကျိုး၊ လူမျိုးအကျိုး စတာတွေအတွက် ပိုလုပ်နိုင်အောင် အကောင်းဘက်အတွက် ပြောင်းရတာလို့ စိတ်ထဲမှာ ပြောင်းယူရမယ်။ သွေးကျဆေး အမျိုးမျိုးကို တမျိုးမက တွဲတွဲသောက်ရတယ်။
• Hypertension or High Blood Pressure သွေးတိုးရောဂါ
On Sat, Jun 25, 2011 at 10:14 AM,
Hi Dr. Tint Swe, I am now 3rd day of my period after miscarriage of first pregnancy. I had done D&C on 25 May, 2011. Now my period is like previously, so can I try for my 2nd child after period? Currently I m doing workout on gym also, so when should I stop doing workout on gym to prevent miscarriage and other pregnancy related problem?
• I'm sorry for miscarriage. However afteramiscarriage, normal pregnancy is mostly likely. Be encouraged.
• There are various causes of unfortunate pregnancies. Sometimes doctors do not know why. Physical activity is only one of the potential causes but not always.
• So take regular exercise, meal and work. Be positive!
• Beagood mother!
ကျနော့်အသက်က ၂၃ ရှိပါပြီ။ ခုလက်ရှိ (့) မှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သွားနုတ်ပြီး သွားအတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်ငယ်ငယ်က လှေကထစ်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီးသွားတွေတော်တော်လေး ကြည့်မကောင်းအောင် ပျက်သွားပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာမှ ခရုမစိုက်ခဲ့ပေမယ် ခုကြီးလာတော့ လူတစ်ယောက်ရှေ့မှာ မပြုံးရဲ့ တောဘူး။
နုတ်မယ်ဆိုရင် ၄ ချောင်းလောက်နုတ်မှ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ ကျနော်သွားနုတ်ပြီး အတုသပ်လိုက်ရင် ကြာရှည်အတွက် ကောင်းနိုင်မလား။ ပြီးတော့ သွားကို အရှင်သပ်တာမျိုးနှင့် အသေ သပ်တာဆိုပြီး ကြားဖူးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အသေသပ်ခြင်ပါတယ်။ တကယ်သွားနဲ့တူနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။
• ကျွန်တော်က BDS ဆရာဝန်တော့မဟုတ်ပါ။ သွားစိုက်ဆရာတွေကိုမပြဘဲ၊ သွားဆရာဝန်ကိုသာပြစေချင်တယ်။ နာမည်ရတဲ့ ဆေးခန်းဆို ပိုကောင်းတယ်။ မျက်မှန်ဆိုင်တို့ သွားစိုက်ဆိုင်တို့ကတော့ လာတဲ့လူ တပ်ပေးဘို့အကြံပေး-လုပ်ပေးကြတတ်တယ်။
ဆရာခင်ဗျား ယခုလိုသိချင်တာမှန်သမျှ အသေးစိတ် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆရာခင်ဗျား။ ဆရာလည်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာခင်ဗျား။
• ဆုတောင်းပေးသူ ဆုတွေပိုရပါစေဗျာ။
ကျွန်မက အသက် ၂၇ နစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်မ ချောင်းအရမ်းကိုဆိုးတာ ၂ လလောက် ရှိပါတော့မယ်။ ဘာဆေးသောက်သောက်အဆင်မပြေဘူး။ ဆေးရုံ ဆေးခန်းလည်း သွားပါတယ်။ ဆေးခန်းက ပေးတဲ့ ဆေးတွေလည်း သောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သောက်တုံးခဏဘဲ သက်သာပြီး ချောင်းက ပြန်ပြန်ဆိုးတယ်။ ချောင်းဆိုးရင်လည်း သလိပ်တွေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဘာဆေးသောက်ရမလဲဆိုတာကိုညွန်ကြားပေးပါ။
• ကျွန်တော် အတော်လေး မအားလို့ ဖြေတာ နောက်ကျသွားတယ်။ ရောဂါတောင် ပျောက်နေလောက်ပြီထင်တယ်။ ပျောက်နေပါစေ။
• ခက်တာက ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ ချောင်းဆိုးတာမျိုးက အသက်ရှူလမ်းကနေ ကူးလာတာ။ အသက်က တသက်လုံး ရှူနေရတော့ ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ဖြစ်လာတာ များတယ်။
• သလိပ်လဲ ထွက်ရင် ပိုးဝင်နေတာ သေခြာတယ်။ ပိုး အမျိုးမျိုးမှာ ဗက်တီးရီးယားကနေ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ ပိုးသေဆေးလိုတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့်ဆို မလိုဘူး။ ပိုးသေဆေး အများကြီး။ အများဆုံးသုံးနိုင်တာက Amoxacillin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၄-၅ ရက်သောက်ပါ။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကလဲ အမျိုးမျိုး။ နာမည်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ချောင်းခြောက်၊ သလပ်ထွက်၊ ရင်ကြပ် အတွက်ဆိုးပြီး မတူကြဘူး။ သလိပ်ထွက်သူဆိုရင် Expectorant ဆိုတာ ရွေးသောက်ရမယ်။ Solvent စာလုံးပါတာက ချွဲပျော်ဆေး။ သိထားဘို့က ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးမှန်သမျှ ရောဂါဖြစ်စေတာကို ကုတာ မဟုတ်ပါ။ ခံစားနေရတာကိုသာ သက်သာစေတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ ပိုးအတွက်ဆေးက မသောက်လို့ မဖြစ်ပါ။
• ၂ ပါတ်နေလို့ မသက်သာသူတွေ TB စစ်သင့်သေးတယ်။
သမီး အမျိုးသားက ဦးခေါင်းမှာ ဗောက်ထတဲ့အလေ့ရှိပါတယ်။ အမြဲလိုလိုပါပဲဆရာ နေ့တိုင်းနီးပါးလည်းခေါင်းလျှော်ပါတယ်။ လျှော်ပြီးတိုင်းလည်း ဗောက်ထပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ ဗောက်သတ်ဆေးဝယ်သုံးပါတယ်။ သမီးတို့က လက်ရှိ (့)မှာ နေနေတာပါ။ အဲဒီက မြန်မာဆံသဆိုင်ဆိုင်က ရောင်းတဲ့ ဆေးကိုသုံးနေတာပါ။ မထူးတာနဲ့ တလောကတင် အလှကုန်စတိုးက ရောင်းတဲ့ ဆေးဆက်သုံးကြည့်ပါတယ်။ ပိုလို့တောင်ဆိုးသွားပါတယ်။ ဆံပင်တွေ ဖွာလန် ထွက်ကုန်တော့တာပါပဲ။ ဒါနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မသိပါဘူး။ ဆေးတွေက လည်းမျိုးစုံရှိတော့ ဘာကို သုံးသင့်သလဲမသိတော့ပါဘူး။
• Dandruff ဘောက်
အခုတစ်ခါ ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါက ဝမ်းချုပ်တာပါ။ ဒီမှာက ပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့ ရာသီဥတုက ပြင်းပါတယ်။ မေ့လောက်ရှိ တစ်ခါတစ်ခါ ဖျားပါတယ်။ MC ယူရတာလဲ တစ်ခါ ယူရင်၂ရက် ၃ရက်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက တစ်ခါမှတောင် မဖျားဖူးခဲ့တဲသူပါ။ ဝမ်းကတော့အရင်တည်းက ချုပ်တတ်ပါတယ်။ အခုဆို အထိုင်များတာကြောင့် ပိုဆိုးနေပါတယ်။ ရေသောက်မနည်းပါ။ အသီးအနှံ များလဲစားပါတယ်။ ချဉ်ရေဟင်းတွေလဲ ချက်စားပါတယ်။ မန်ကျဉ်းရေက မကြာမကြာ သောက်ပါတယ်။ အဲဒါမှမရလို့ ချုပ်နေရင် ရုံးပိတ်ရက်ကို ဝမ်းနှတ်ဆေးသောက်ရပါတော့တယ်။ အခုက အကျင့်တောင် ဖြစ်နေသလို အပတ်စဉ်သောက်နေရပါတယ်။ ဆေးကြောင့်လားတော့မသိ၊ ကန်တော့နော်ဆရာ၊ အညစ်အကြေးတွေက စအိုနားရှိနေ ပြီးသွားလို့မရ၊ ညှစ်လို့မရနဲ့ တော်တော်ဆိုးနေပါတယ်။ (PS အပြေး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ်ဆိုပြီး အချိန်မရတာရော နားချင်တာရောကြောင့် မလုပ်ဖြစ်သေးပါ)။
• သိတဲ့အတိုင်း ဝမ်းဆိုတာ အကျင့်ဘဲ။ အစားအသောက်ရော ဆေးရော အကျင့်ပါတတ်တယ်။ ကောင်းမယ်ထင်တာက မြန်မာ ဝမ်းနုတ်ဆေး ရွေးသောက်ကြည့်ပါ။ တလောက အမျိုးသမီးကြီး တယောက် မုံရွာ-ဦးမိုး ဆေးသောက်တာ အဆင်ပြေတယ်ပြောတယ်။ တခြားဆေးတွေလဲ ရှိတာပါဘဲ။ လက်လှမ်းမီတာ သုံးကြည့်ပေါ့။ ဆရာဝန်တွေညွှန်တတ်တာတော့ သိမှာပေါ့။ Ducolax စတာတွေ။
Posted by Dr. Tint Swe at 3:24 PM